AIO miovaova etona
■ Fahombiazana avo, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana
■ endrika mifono, fametrahana mora
■ Mora ny miasa, azo antoka ary azo itokisana
■ Fahaizana miady amin'ny harafesina matanjaka, androm-piainana maharitra
•Fitsipika fifanakalozana hafanana mialoha sy famolavolana fananana.
•Fitaovana fanamboarana: Azo alaina amin'ny Galvanized, SS 304, SS 316, SS 316L.
•Asa kely kokoa, famoahana hafanana lehibe
•Rafitra fanaraha-maso teknolojia avo lenta hanomezana fahombiazana sy fitsitsiana avo lenta
PFitsipika momba ny asa: Ny rafitra fonosana mifototra amin'ny Compact Skid dia manome fahombiazana lehibe, fitsitsiana angovo, fitehirizana habakabaka ho an'ny mpanjifa. Ny rafitra Low Ammonia Charge dia midika ho ambany risika, tsy fikojakojana ary ambany ny vidin'ny asa.
Ny mpanjifa dia tsy mila manome afa-tsy Rano, Herinaratra ary fifandraisana misy fantsona madinidinika mba hananganana ny rafitra. Ny rafitra All-In-One dia midika fihenan'ny vidin'ny fitaterana sy ny fametrahana ny vidin'ny asa ambany kokoa.
Izy io koa dia mitazona ny rafitra ho madio, mihena ny fipoahana ary ny fikojakojana. Ny fandaminana tsy mandeha dia midika fa ny fahafaha-mifindra amin'ny fifandraisana amin'ny rano / herinaratra dia mety ho eo amin'ny lafiny ankavia na ankavanan'ny masinina. Ny olana rehetra momba ny tranokala amin'ny resaka fametrahana, fitaterana ary fikirakirana fitaovana dia esorina.
•Metro •Indostria simika
•Ivotoerana data •Fambolena ranomandry
Teo aloha: Condenser evaporative - Counter Flow
Rafitra fampangatsiahana ny efitrano mangatsiaka
Rafitra fanamafisana indostrialy
Ny vata fampangatsiahana ao anaty lozisialy ao anaty rafi-dranomandry